nepal insurance company limited(nepal insurance company limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आगामी दिनमा नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ के होला ? (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपालको बीमा क्षेत्रमा यो वर्ष जीवन बीमा व्यवसायमा कोभिडका कारण केही बढी दाबी भुक्तानी परेको र अझै पर्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। निर्जीवन बीमा व्यवसायमा भने कोभिडको प्रभाव सामान्य नै रहेको उनीहरुको तर्क छ। यसै सिलसिलामा आज हामीले नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका २० निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एउटा नेपाल...
नेपाल इन्स्योरेन्समा निमित्त सीईओको जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेललाई
काठमाण्डौ । नेपाल पहिलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा निमित्त सीईओको जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेलले पाएका छन्। कम्पनी सञ्चालक समितिले निमित्त सीईओको जिम्मेवार पोखरेललाई दिने निर्णय गरेको हो। कम्पनीमा पोखरेल नायब सीईओका रुपमा कार्यरत थिए। सीईओ विजयबहादुर शाहको करार सेवा अवधि गत साउन ८ गते सकिएको थियो। जसका कारण...
नेपाल इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन ३५.२८%ले बढ्यो, नाफा रु. १७ करोड बढी
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३५.२८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ४३ करोड १ लाख रुपैयाँ...
नेपाल इन्स्योरेन्जको एजीमए आज, लाभांशसहित यी अजेन्डा हुँदैछन् अनुमोदन
काठमाण्डौ । लाभांशसँगै विभिन्न अजेन्डा पारित गर्न नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आज (चैत २७ गते) ७२ औँ वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) हुँदैछ। सभा काठमाण्डौको सिनामंगलस्थित एयरपोर्ट होटेलमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित चुक्तापुँजीको कुल १० प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा ८ प्रतिशतले हुन...
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो ७२ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही चैत २७ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको सिनामंगलस्थित एयरपोर्ट होटेलमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित �...
नेपाल इन्स्योरेन्सले एनसीसी बैंकको संस्थापक सेयर लिलामीमा राख्ने, क-कसले किन्न पाउँछ ?
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडको संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। इन्स्योरेन्सले बैंकमा रहेको ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर आउँदो असोज २ गतेबाट लिलामीमार्फत बेच्न लागेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापकहरु वा...
स्थगित नेपाल इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभाको मिति पुनः तय
काठमाण्डौ । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण स्थगित नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ७१ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान पुनः तय गरिएको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान पुनः तय गरेको हो। बैठकले वार्षिक साधारणसभा असार ५ गते...
नेपाल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा रु. १३.४० करोड, ईपीएस रु. १६.३२
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले खुद नाफा २.६४ प्रतिशत बढाउन सफल भएको छ। तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले खुद...
नेप्सेमा दुई कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा मंगलबार दुई कम्पनीका सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले बोनस सेयरका लागि महिला सहयात्रा लघुवित्त र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले मूल्य समायोजन गर्दै महिला सहयात्रा लघुवित्तको ६८२.७३ रुपैयाँ र नेपाल इन्स्योरेन्सको ३९६.१९ रुपैयाँ कायम गरेको...
दुई कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कुन–कुन, कति–कति?
काठमाण्डौ । दुई कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ। महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको हो। यी दुवै कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि भोलि मंगलबार (चैत ४) गतेदेखि बुक क्लोज...
नेपाल इन्स्यारेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस सेयर र नगद कति ?
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्यारेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको हिजो बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजीको कुल ७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश चुक्तापुँजी १...
नेपाल इन्स्योरेन्सले ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ७.५ प्रतिशतले बोनस सेयर वितरण गर्ने मुख्य एजेन्डाका साथ वार्षिक साधारणसभाको मिति तय गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको गत बुधबार बसेको बैठकले कम्पनीको ७० औं वार्षिक साधारणसभा आउँदो भदौ ५ गते गर्ने तय गरेको हो । बैठकले बोनस वितरण तथा...
नेपाल इन्स्योरेन्सको नगद लाभांश बिमा समितिद्वारा खारेज, सेयरधनी आफैंले कर तिर्नुपर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्सले घोषणा गरेको ७.५ प्रतिशत बोनस सेयरको कर प्रयोजनार्थ वितरण गर्ने भनिएको नगद लाभांश बिमा समितिले रोकेको छ । बोनस सेयरको कर प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने भनिएको नगद लाभांश बिमा समितिले रोकेसँगै नेपाल इन्स्योरेन्सको बोनस पाउने सेयरधनीले कर भने आफैंले तिर्नुपर्ने भएको छ । यो कम्पनीको असार ५ गते बसेको...
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडे आफ्ना सेयरधनीलाई ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको घोषणा गरेको छ । कम्पनीको असार ५ गते बसेको संचालक समितिको २८ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफा नोक्सान हिसाबमा बाँडफाँडका लागि उपलब्ध रकमबाट ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि आवश्यक नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो...